Kooxdii Xidigaha Geeska oo la sii daayay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
30th September 2015 MAREEG Af Soomaali 0
September 30 (Mareeg.com)— Afartii Fanaan ee Kooxda Xidigaha Geeska ayaa goor dhow xabsiga laga sii daayay, kadib amar ka soo baxay Maxkamadda Gobolka Hargeysa oo ku saabsanaa in la sii daayo Fanaaniintan.
Fanaaniintan oo kala ahaa Nicmaan Hilaa, Xamda Queen, C/raxmaan Oday, iyo Maxamed Axmed Bakaal Cirro ayaa la xiray maalinimadii Axadii, kadib markii ay ka soo laabteen magaalada Muqdisho, oo ay maalmihii Ciida bandhig faneed ku dhigeen.
War qoraal ah oo ka soo baxay Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Hargeysa Axmed Dalmar Ismaaciil ayaa waxaa uu ku wargeliyay Booliska in Fanaaniintaas xoriyadooda loo soo celiyo.
Fanaaniintan oo shalay Maxkamad la horkeenay ayaa muddo todobaad Maxkamaddu amartay in xabsiga lagu haayo, kadib markii la keeni waayay cadeymo dhameystiran oo ku saabsan xarigooda.
Qoraalka Maxkamadda Gobolka Hargeysa ayaa lagu sheegay in Booliska uu ku guuldareystay inay Maxkamadda horkeenaan sabab sharci ah oo macquul ah oo ay uga baaqsadeen inay ku dalbadaan amar qabasho iyo inay keenaan cadeymaha la xiriira xarigooda oo faah faahsan.
Qoraalka Maxkamadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in Dastuurka Somaliland, gaar ahaan qodobkiisa 25aad uu damaanad qaadayo xoriyada aas aasiga aee qofka, isla markaana ay reeban tahay in aan qofna xoriyadiisa looga qaadi karin si aan sharciga waafaqsaneyn.
Xariga Fanaaniintan ayaa waxaa hadal heyntiisa hareysay baraha bulshada oo dadka siyaabo kala duwan uga hadlayeen, waxaana dadka ay fariimo iska soo horjeeda soo gelinayeen barta Facebook, waxaana fariimaha qaar ka mid ahaa Fanaaniin qaarkood ku baaqayay in la sii daayo afarta fanaan.